Nei Yangu iPhone Bhatiri Inofa Nokukurumidza? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
nharembozha yangu yaizvidaidza
tsvaga yangu iphone ye windows 10
iphone wont boot yapfuura apple logo
mukadzi haatunde regai ndimubate
zvekuita kana ipad ikuti batanidza kuitunes
Nei Yangu iPhone Bhatiri Inofa Nokukurumidza? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Ndiri kuzokuudza chaizvo nei yako iPhone bhatiri inodonhedza nekukurumidza kudaro uye kunyatso gadzirisa sei . Ini ndichatsanangura kuti ungawana sei hupenyu hwakareba hwebhatiri kunze kwe iPhone yako pasina kubayira kushanda. Tora izwi rangu nezvazvo:
Iyo yakawanda kwazvo ye iPhone bhatiri nyaya zvine software zvine chekuita.
Tichavhara huwandu hwe yakaratidza iPhone bhatiri inogadzirisa izvo zvandakadzidza kubva kune chekutanga-ruoko ruzivo nemazana ePhones ini pandainoshandira Apple. Heino mumwe muenzaniso:
Yako iPhone inoteedzera uye inonyora nzvimbo yako kwese kwaunoenda. Izvo zvinoshandisa zvakawanda yehupenyu hwebhatiri.
Makore mashoma apfuura (uye mushure mekunge vanhu vazhinji vanyunyuta), Apple yaisanganisira chikamu chitsva cheMisangano inonzi Bhatiri . Inoratidzira rumwe ruzivo runobatsira, asi harukubatsire gadzirisa chero chinhu. Ini ndakanyorazve chinyorwa ichi kugadzirisa iOS 13 hupenyu hwebhatiri, uye kana iwe ukatora aya mazano, Ndinovimbisa hupenyu hwako hwebhatiri huchavandudza , ungave uine iyo iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, kana iPhone X.
Ini ndichangobva kugadzira Vhidhiyo yeYouTube kuenda pamwe neye iPhone bhatiri inogadzirisa yandinotsanangura mune ino chinyorwa. Kunyangwe iwe uchifarira kuverenga kana kutarisa, iwe unowana iwo iwo akafanana ruzivo rwakakura mumavhidhiyo eYouTube iwe aunoverenga mune ino chinyorwa.
Yedu yekutanga tip ndeyechokwadi iri kurara hofori uye pane chikonzero chiri # 1: Kugadzirisa Push Mail kunogona kuita zvikuru mutsauko muhupenyu hwebhatiri ye iPhone yako.
mvura inomiririra izvo zviri mubhaibheri
Iyo Chaizvoizvo Zvikonzero Zvako iPhone, iPad, kana iPod Bhatiri Kufa Saka Zvikurumidza
1. Pushira tsamba
Kana tsamba yako yaiswa ku Pusha , zvinoreva kuti yako iPhone inochengetedza chinongedzo chenguva dzose kune yako email server kuitira kuti sevha ikwanise ipapo Pusha iyo tsamba kune yako iPhone painongosvika. Zvinonzwika zvakanaka, handiti? Zvakashata.
An Apple anotungamira shasha akatsanangura kwandiri seizvi: Kana yako iPhone yakaiswa kusunda, iri kugara ichibvunza sevha, 'Pane tsamba here? Pane tsamba here? Pane tsamba here? ', Uye kuyerera kwe data uku kunoita kuti bhatiri rako riparadze nekukurumidza. Shanduro maseva ndiwo akanyanya kukanganisa, asi munhu wese unogona kubatsirwa nekushandura iyi marongero.
Nzira Yokugadzirisa Push Mail
Kugadzirisa dambudziko iri, tiri kuenda kuchinja iPhone yako kubva Pusha ku fetch. Iwe uchachengetedza hupenyu hwakawanda hwebhatiri nekuudza yako iPhone kuti itarise tsamba nyowani maminetsi gumi nemashanu panzvimbo yenguva dzese. Yako iPhone ichagara ichitsvaga tsamba nyowani pese paunovhura iyo Email app.
Enda ku Zvirongwa -> Maakaundi & Mapasipoti -> Tora Dhata Nyowani .
Dzima Push pamusoro.
Dhura kusvika pasi uye sarudza Wese maminetsi gumi neshanu pasi Tora .
Tinya pane yega yega email account uye, kana zvichibvira, chinja iyo Tora .
Zvirongwa -> Maakaundi & Mapasipoti -> Tora Dhata Nyowani
Set Set kuti maminitsi gumi nemashanu
Chinja maakaundi kuti utore
Vanhu vazhinji vanobvumirana kuti kumirira maminetsi mashoma kuti email isvike kune kukosha kwekuvandudza kwakakosha muhupenyu hwebhetri re iPhone yako.
Se parutivi, kana wanga uchinetseka kuenzanisa mafoni kana makarenda pakati pe iPhone yako, Mac, nezvimwe zvishandiso, tarisa yangu imwe chinyorwa chinonzi Nei Vamwe Vangu Vangu Vavanobata Vanoshayikwa Kubva ku iPhone yangu, iPad, kana iPod? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Ini ndinokuratidza masevhisi akavanzika anogara achidhonza bhatiri rako, uye ini ndakagadzirira kubheja iwe usati wambonzwa kana mazhinji acho. Ndinotenda zvakakosha kune iwe kusarudza kuti ndeapi mapurogiramu nemasevhisi anokwanisa kuwana nzvimbo yako, kunyanya kupihwa iyo yakakosha bhatiri dhureni uye zvemunhu zvakavanzika nyaya izvo zvinouya ne iPhone yako, kunze kwebhokisi.
Maitiro Ekugadzirisa Nzvimbo Mahara
Enda ku Zvirongwa -> Zvekuvanzika -> Mahara Mahara .
Tinya Goverana Nzvimbo Yangu . Kana iwe uchida kugona kugovera nzvimbo yako nemhuri yako uye neshamwari mune Messages app, ipapo siya izvi zviripo, asi chenjera: Kana mumwe munhu aida kukutevera, aya ndiwo maitirwo azvo.
Mupumburu yose nzira kusvikira pasi uye vawane System Services . Ngatibvisei zvisirizvo fungidziro zvisizvo ipapo: Mazhinji eaya marongero ari ese nezve kutumira data ku Apple yekushambadzira nekutsvaga. Patinoadzima, yako iPhone inozoramba ichishanda sekugara kwayakaita.
Dzima zvese pane peji kunze Emergency SOS , Tsvaga yangu iPhone (saka unogona kuiwana kana yakarasika) uye Motion Kuchengetedza & Kureba (kana iwe uchida kushandisa yako iPhone se pedometer - zvikasadaro, dzima izvo zvakare). IPhone yako ichashanda chaizvo sezvaimboita kare. Iyo kambasi icharamba ichishanda uye iwe unozobatana nesero shongwe zvakangonaka - zvakangodaro kuti Apple haizove iri kugamuchira dhata nezvehunhu hwako.
Tinya Nzvimbo Dzinokosha . Unoziva here kuti yako iPhone yanga ichikuteedzera kwese kwese unoenda? Iwe unogona kufungidzira iyo yakanyanya kusagadzikana inoisa pane yako bhatiri. Ndinokurudzira kuti udzime Nzvimbo Dzinokosha . Tinya kudzokera kumutambo mukuru weSystem Services.
Bvisa ese switch pasi Chigadzirwa Kuvandudza . Izvi zvinongotumira ruzivo kubatsira Apple kuvandudza zvigadzirwa zvavo, kwete kuita kuti yako iPhone imhanye zvakanyanya.
Mupumburu kusvika pasi uye batidza Status Bar Icon . Nenzira iyoyo, iwe unozoziva kuti nzvimbo yako iri kushandiswa kana museve mudiki ukaonekwa padyo nebhatiri rako. Kana iyo museve uripo nguva dzese, panogona kunge paine chakashata. Tinya kuti udzokere kune yakakosha Nzvimbo Yemasevhisi menyu.
Dzima Nzvimbo Yemasevhisi emaapps asingade kuziva kuti uripi.
Zvamunoda kuziva: Kana iwe ukaona museve wepepuru padhuze neapp, iri kushandisa nzvimbo yako izvozvi. Museve wegrey unoreva kuti wakashandisa nzvimbo yako mukati memaawa makumi maviri nemana apfuura uye museve wakarongedzwa nepepuru zvinoreva kuti uri kushandisa geofence (zvimwe nezve geofence gare gare).
Teerera kune chero maapplication ane epepuru kana grey miseve padyo navo. Izvi zvibodzwa zvinoda kuziva nzvimbo yako kuti ishande here? Kana vakadaro, izvo zvakanyatsonaka - vasiye vakadaro. Kana vakasadaro, tinya pazita reapp uye sarudza Hazvina kumboitika kumisa iyo app kubva mukukanganisa zvisina kufanira bhatiri rako.
Bvisa maSystem Services
Bvisa Nzvimbo Dzinokosha
Dzima maapplication asina basa
Izwi Nezve Geofencing
TO geofence inzvimbo yekutenderera yakatenderedza nzvimbo. Zvirongwa zvinoshandisa geofencing kukutumira zviyeuchidzo paunosvika kana kubva kwaunenge uchienda. Ipfungwa yakanaka, asi kuti geofenzi ishande, yako iPhone inofanirwa kugara uchishandisa GPS kubvunza, 'Ndiri kupi? Ndiripi? Ndiripi?'
Ini handikurudzire kushandisa maapplication anoshandisa geofenzi kana nzvimbo-yakavakirwa zviyeuchidzo nekuda kwenhamba yenyaya dzandakaona uko vanhu vasingakwanise kuzviita kuburikidza nezuva rizere vasina kuda kubhadharisa yavo iPhone - uye geofencing ndiyo yaive chikonzero.
3. Usatumire iPhone Analytics (Diagnostics & Usage Data)
Heino inokurumidza: Musoro ku Zvirongwa -> Zvakavanzika , pfugama kusvika pasi, uye vhura Ongororo . Dzima switch iripedyo neKugovana iPhone Analytics uye Goverana iCloud Analytics kumisa yako iPhone kubva otomira kutumira data kuApple nezve mashandisiro aunoita yako iPhone.
4. Vhara Mapurogiramu Ako
Kamwe zuva nezuva kana maviri, ipfungwa yakanaka kuvhara maapplication ako. Munyika yakakwana, haufanire kuita izvi uye vashandi vazhinji veApple havazomboti unofanira kudaro. Asi nyika yePhones iri kwete kukwana - dai zvirizvo, ungadai usiri kuverenga chinyorwa ichi.
Do not Apps Close Kana Ndichidzokera KuImba Screen?
Kwete, havadaro. Ivo vanofanirwa kuenda mune yakaturikwa modhi uye gara wakaremerwa mundangariro kuitira kuti paunovhura zvakare, iwe unotora chaipo pawakasiira. Hatigare mu iPhone Utopia: Ichokwadi kuti maapplication ane zviputi.
Yakawanda bhatiri yekudonha nyaya zvinoitika kana iko app iri kufungidzirwa kuvhara, asi hazviite. Pane kudaro, iyo app inopunzika kumashure uye yako iPhone bhatiri zvisikwa zvekudonha iwe usina kana iwe kuzviziva.
Yekupwanya app inogona zvakare kukonzera yako iPhone kuti ipise. Kana zviri kuitika kwauri, tarisa chinyorwa changu chinonzi Nei yangu iPhone Ichipisa? kuti uone kuti nei uye wozvigadzirisa zvakanaka.
iphone skrini inoenda nhema uye inodzoka on
Maitiro Ekuvhara Kunze Zvirongwa Zvako
Tinya kaviri Pamba Bhatani uye iwe uchaona iyo iPhone app chinja . Iyo switch switch inobvumidza iwe kuona ese maapplication ayo akachengetwa mundangariro ye iPhone yako. Kuti uone kuburikidza nerondedzero, Rova zvakasimba kuruboshwe kana kurudyi nemunwe wako. Ini ndinotengesa iwe uchashamisika ne mangani maapplication akavhurwa!
Kuti uvhare Anwendung, shandisa munwe wako kuti usvetukire pamusoro peapp uye usundidzire pamusoro pechiso. Iye zvino wave chaizvo akavhara iyo app uye haigone kukweva bhatiri rako kumashure. Kuvhara maapplication ako kwete inobvisa dhata kana inokonzeresa chero yakaipa mhedzisiro - inogona chete kungokubatsira iwe kuwana zvirinani hupenyu hwebhatiri.
Rova zvakasimba kuruboshwe uye kurudyi kuti uvhure maapplication
Pusha maapplication kubva pamusoro pechidzitiro kuti uvhare
Ndingaite Sei Ini Kuti Ndizive Kana Mapurogiramu Anga Achirovera Pane Yangu iPhone? Zvese Zvinoita Sezvakanaka!
Kana iwe uchida humbowo, enda ku Zvirongwa -> Zvakavanzika -> Analytics -> Analytics Dhata . Hazvisi hazvo chinhu chakashata kana app yakanyorwa pano, asi kana iwe ukaona akawanda manyorerwo eiyo imwechete app kana chero maapplication akanyorwa pazasi LatestCrash , iwe unogona kuve uine dambudziko neiyo app.
Iyo App Kuvhara Kupokana
Munguva pfupi yapfuura, ini ndaona zvinyorwa zvinoti kuvhara maapplication ako kuri chaizvo zvinokuvadza kune iPhone bhatiri hupenyu. Chinyorwa changu chakadaidza Iko Kuvhara iPhone Mapurogiramu Chakaipa Pfungwa? Kwete, Uye Heino Chikonzero. inotsanangura mativi ese enyaya, uye nei kuvhara mapurogiramu ako chaizvo ndizvo zano rakanaka kana iwe ukatarisa pamufananidzo muhombe.
5. Notifications: Chete Shandisa Ivo Vaunoda
Notifications: OK kana Usabvumira?
Isu tese takaona mubvunzo kumberi patinovhura app kekutanga: ' App Ungade Kutumira Iwe Push Notifications ', uye isu tinosarudza Zvakanaka kana Usatendere . Vashoma vanhu vanoziva zvakakosha zvakadii ndeyekuchenjerera kuti ndeapi maapplication aunoti OK kune.
Kana iwe uchibvumira iyo app kuti ikutumire iwe Push Notifications, urikupa iyo app mvumo yekuramba uchimhanya kumashure kuitira kuti kana chimwe chinhu chikaitika iwe une hanya nazvo (sekugamuchira meseji kana timu yako yaunofarira kuhwina mutambo), iyo app anogona kukutumira yambiro kukuzivisa iwe.
Notifications zvakanaka, asi ivo ita dhonza hupenyu hwebhatiri. Tinofanira kuziviswa patinogamuchira mameseji, asi zvakakosha kune isu kusarudza kuti ndeapi mamwe maapplication anobvumidzwa kutitumira isu zviziviso.
Zvirongwa -> Notifications
Maitiro Ekugadzirisa Notifications
Enda ku Zvirongwa -> Notifications uye iwe uchaona runyorwa rwezvako zvese maapp. Pasi pezita reapp yega yega, iwe uchaona chero Off kana iyo mhando yezviziviso izvo app inobvumidzwa kukutumira iwe: Mabheji, Inzwi, kana Banners . Regedza maapplication ayo anoti Off uye tarisa kuburikidza nerondedzero. Paunenge uchienda, zvibvunze mubvunzo uyu: 'Ini ndinofanira kupihwa chenjedzo kubva kuapp iyi kana isiri kuvhurwa?'
iphone yangu haizobatanidze kune wifi asi zvimwe zvishandiso zvinodaro
Kana mhinduro iri hongu, siya zvese sezvazviri. Zvakanaka chose kubvumira mamwe maapplication kukuzivisa iwe. Kana mhinduro iri kwete, iri zano rakanaka kudzima zviziviso zveapp iyoyo.
Kudzima zviziviso, tinya zita reapp uye dzima switch iripedyo Rega Kuzivisa . Kune dzimwe sarudzo muno zvakare, asi hadzikanganise hupenyu hwebhatiri re iPhone yako. Izvo zvinongokosha kana Notices dzadzimwa kana kuvhurwa.
6. Dzima Widgets Iwe yausingashandise
Widgets idiki 'mini-maapps' ayo anoramba achimhanya kumashure kweiyo iPhone yako kukupa iwe nyore kuwana kune-up-to-date ruzivo kubva kune ako aunofarira maapplication. Nekufamba kwenguva, iwe unozochengetedza huwandu hwakakosha hwehupenyu hwebhatiri nekudzima iwo mawijeti ausingashandise. Kana usambozvishandisa, zvakanaka kudzima zvese.
Kuti uwane mawijeti ako, tinya bhatani repamba kuenda kune yako iPhone's Kumba skrini uye Rova zvakasimba kubva kuruboshwe kurudyi kusvikira iwe wasvika kune majeti. Wobva wadzvanya pasi wobva wadzvanya iyo yakatenderera Hora bhatani. Pano iwe uchaona runyorwa rwemajeti iwe aunogona kuwedzera kana kubvisa pane yako iPhone. Kuti ubvise widget, tinya bhatani red minus kuruboshwe.
7.Dzima foni yako kamwe pavhiki (iyo nzira kwayo)
Icho chidimbu chiri nyore asi chakakosha zvakadaro: Kudzima yako iPhone kudzoka uye kudzoka zvakare kamwe pasvondo kunogona kugadzirisa zvakavanzika bhatiri-hupenyu nyaya dzinoungana nenguva. Apple haimbokuudza izvozvo nekuti mu iPhone Utopia, zvaisadaro.
Munyika chaiye, kudzima iPhone yako kunogona kubatsira kugadzirisa nyaya nemapurogiramu akarova kana zvimwe, mamwe matambudziko ehunyanzvi anogona kuitika kana chero komputa yanga iripo kwenguva yakareba.
Izwi renyevero: Usabatirire pasi bhatani remagetsi uye bhatani repamba panguva imwechete kuti uvhare yako iPhone. Izvi zvinodaidzwa kuti 'zvakaoma patsva', uye zvinofanirwa kushandiswa chete pazvinenge zvichidikanwa. Zvakafanana nekuisa simba pakombuta yedhiraini nekudhonza plug kubva pamadziro.
Maitiro Ekudzima Yako iPhone (Iyo Rudyi Nzira)
Kuti ubvise iPhone yako, tinya uye ubatise bhatani remagetsi kudzamara 'slide yemagetsi kudzima' yaonekwa. Rova zvakasimba denderedzwa simba ikoni kuyambuka chidzitiro nechigunwe chako uye mirira apo yako iPhone inodzima pasi. Zvakajairika kuti maitiro acho atore masekondi akati wandei. Tevere, dzosera yako iPhone kumashure nekudzvanya uye kubata bhatani remagetsi kudzamara waona iyo Apple logo ichioneka.
8. Background App Zorodza
Yepamberi App Refresh
Mamwe maapplication pane yako iPhone anotenderwa kushandisa yako Wi-Fi kana nharembozha yekubatanidza kudhaunirodha zvinyorwa zvitsva kunyangwe iwe usiri kuzvishandisa. Unogona kuchengetedza huwandu hwakakura hwehupenyu hwebhatiri (uye imwe yedhata rako re data) nekudzikamisa huwandu hwemaapplication anotenderwa kushandisa chinhu ichi chinonzi naApple Background App Refresh.
Maitiro Ekugadzirisa Background App Refresh
Enda ku Zvirongwa -> Zvakajairika -> Yekumashure App Refresh . Pamusoro, iwe uchaona yekuchinja switch iyo inodzima Background App Refresh zvachose. Ini handikurudzire kuti uite izvi, nekuti Background App Refresh unokwanisa uve chinhu chakanaka kune mamwe maapplication. Kana iwe wakaita seni, iwe uchave unokwanisa kudzima dzinenge dzese maapps pane ari runyorwa.
Paunenge uchipururudza kuburikidza neapp yega yega, zvibvunze mubvunzo uyu: “Ndinoda here kuti Anwendung iyi ikwanise kurodha pasi ruzivo rutsva kunyangwe ndiri kwete kurishandisa? ” Kana mhinduro iri hongu, siya Background App Refresh inogoneswa. Kana zvisiri, zvidzime uye unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita
9. Chengeta Your iPhone Cool
Sekureva kwaApple, iyo iPhone, iPad, uye iPod zvakagadzirirwa kushanda kubva pamadhigirii makumi matatu nemasere kusvika makumi maviri neshanu madigiri (0 madhigirii kusvika pamadhigirii makumi matatu neshanu celsius). Izvo zvavasinga gare vachikuudza ndezvekuti kuisa iPhone yako kumatembiricha ari pamusoro pe 95 degrees fahrenheit inogona kukuvadza zvachose bhatiri rako.
Kana riri zuva rinopisa uye iwe uri kuenda kunofamba, usazvidya mwoyo nezvazvo - unenge wagona. Zvatiri kutaura nezvazvo pano kugara kwenguva refu pakupisa kwakanyanya. Tsika yenyaya: Kungofanana nembwa yako, usasiya yako iPhone mumota inopisa. (Asi kana iwe waifanira kusarudza, ponesa imbwa).
Ko Kutonhora Kwemamiriro Ekunze Kunokanganisa Yangu iPhone Bhatiri?
Kutonhora kwakadzika hakuzokanganisa yako iPhone bhatiri, asi chimwe chinhu zvinoita kuitika: Iyo inotonhora inotanga, iyo inokurumidza yako bhatiri danho madonhwe. Kana tembiricha ikadzika zvishoma, yako iPhone inogona kumira kushanda zvachose, asi painodziya zvakare, yako iPhone nebhatiri danho rinofanira kudzokera kune zvakajairwa.
10. Ita Kuti Auto-Lock Idzoke
Imwe nzira yekukurumidza yekudzivirira bhatiri iPhone bhatiri rekugera ndeyekuita chokwadi auto-kukiya yakavhurwa. Vhura iyo Zvirongwa app uye tap Ratidza & Kupenya -> Auto-Lock . Wobva wasarudza chero sarudzo kunze kweKusambofa! Iyi ndiyo nguva yenguva yaunogona kusiya yako iPhone pane iyo pamberi pekuratidzira kudzima uye ndokupinda munzira yekurara.
11. Dzima Mhedzisiro Isina Kukodzera Mhedzisiro
iPhones dzakanaka, kubva pane zvemahara kusvika kune software. Isu tinonzwisisa iyo yakakosha pfungwa yekugadzira izvo zvemidziyo yezvinhu, asi chii chinobvumidza iyo software kuratidza yakadaro yakanaka mifananidzo? Mukati me iPhone yako, chidimbu chidiki chehardware chakavakirwa mubhokisi remagetsi chinonzi Graphics Processing Unit (kana GPU) chinopa yako iPhone simba rekuratidzira ayo akanaka ekuona maitiro.
Dambudziko nemaGPU ndeekuti vagara vaine simba-nzara. Iye anofarira kuona zvinoonekwa, inokurumidza bhatiri kufa. Nekuderedza kunetseka pane yako iPhone's GPU, isu tinogona kuwedzera zvakanyanya hupenyu hwebhatiri rako. Kubvira pakaburitswa iOS 12, unogona kuzadzisa zvese zvandaimbokurudzira mune akati wandei matipi akasiyana nekuchinja imwe nzvimbo munzvimbo yaungafungire kutarisa.
yangu iphone 6 inoramba ichingopenya
Enda ku Zvirongwa -> Kuwanikwa -> Motion -> Deredza Motion uye tora switch kuti ubatidza.
Kunze kweparallax Wallpaper mhedzisiro pachiratidziro chekumba, pamwe haungaone chero misiyano uye iwe uchachengetedza yakakosha huwandu hwehupenyu hwebhatiri.
12. Dzorera Yakagadziridzwa Bhatiri Yekuchaja
Optimized Battery kuchaja kunoita kuti yako iPhone idzidze nezve ako maitiro ekuchaja kudzikisa bhatiri kukwegura. Tinokurudzira kuvhura iyi marongero kuti iwe ugone kuwana zvakanyanya kubva kune yako bhatiri bhatiri kwenguva yakareba yenguva.
Vhura Zvirongwa uye tapira Bhatiri -> Bhatiri Hutano . Wobva wabatidza switch padivi peKugonesa Bhatiri Kutengesa.
13. DFU Dzosera & Dzosera Kubva Kubva iCloud, Kwete iTunes
Panguva ino, iwe wakamirira zuva kana maviri uye hupenyu hwako hwebhatiri hausati hwave nani. Inguva yekudzorera yako iPhone . Tinokurudzira kuita DFU kudzorera . Mushure mekudzorera kwapera, tinokurudzira kudzorera kubva kuICloud backup kana uchikwanisa.
Rega ndive akajeka: Ehe, iwe unofanirwa kushandisa iTunes kudzoreredza yako iPhone - hapana imwe nzira. Tiri kutaura nezve nzira yaunodzosera data rako pa iPhone yako mushure yakadzorerwa kumigadziriro yefekitari.
Vamwe vanhu vanovhiringidzika nezve chaizvo riinhi zvakachengeteka kubvisa iPhone yako kubva pakombuta yako. Paunongoona iyo 'Mhoro' skrini pane yako iPhone kana 'Set Up Yako iPhone' mu iTunes, zvakachengeteka zvachose kudimbura yako iPhone.
Tevere, shandisa mamenyu pane yako foni kuti ubatanidze kuWi-Fi uye udzore kubva kune yako iCloud backup. Kana wanga uchinetseka kutsigira kumusoro kuICloud uye kunyanya kana iwe wapererwa nekuchengetedza, tarisa chinyorwa changu icho chiri nezve sei kugadzirisa iCloud negadziriro yeparutivi.
Handizvo iCloud Backups uye iTunes Backups Zvinonyanya Zvakafanana?
Hongu, iCloud backups uye iTunes backups ita zvine zvinyorwa zvakafanana zvakafanana. Icho chikonzero chandinokurudzira kushandisa iCloud ndechekuti zvinotora komputa yako uye chero matambudziko aingave aine zvachose kunze kwemufananidzo.
15. Unogona Kuva Nechinetso cheHardware (Asi Chingave Chisiri Bhatiri)
Mukutanga kwechinyorwa chino, ini ndataura kuti ruzhinji rwezvinhu zvine chekuita nehupenyu hwebhetri re iPhone zvinobva pasoftware, uye ichokwadi chaizvo. Kune akatiwandei zviitiko apo nyaya ye Hardware unokwanisa kukonzera matambudziko, asi mune zvese zviitiko dambudziko harisi nebhatiri.
Madonhwe uye kudururwa zvinogona kukonzera kukuvara kwemukati zvikamu izvo zvinobatanidzwa mukuchaja kana kuchengetedza chiraji pane yako iPhone. Bhatiri pachayo rakagadzirirwa kuti rinyatso kusimba, nekuti dai rakabayirwa raigona kuputika chaiko.
Iyo Apple Chitoro Bhatiri Bvunzo
Paunounza yako iPhone kuApple Store kuti ishandiswe, Apple techs inomhanyisa yekukurumidza kuongorora iyo inoratidza huwandu hwakaenzana hwemashoko nezve hutano hwakazara hwe iPhone yako. Imwe yeiyi diagnostics ndeye bvunzo bhatiri, uye kupasa / kukundikana. Munguva yangu yese kuApple, ndinotenda ndakaona maPhones maviri ane mabhatiri asina kupasa bvunzo iyoyo - uye ini ndakaona zvakawanda yePhones.
Kana yako iPhone ikapfuura bhatiri bvunzo, uye pane 99% mukana zvichadaro, Apple ichadaro kwete tsiva bhatiri rako kunyangwe iwe uri pasi pewarandi. Kana usati watora matanho andakatsanangura muchinyorwa chino, vanokutumira kumba kuti uzviite. Kana iwe have ndaita zvandataura, unogona kuti, 'Ndakaedza izvozvo kare, zvikaramba.'
Kana Iwe Uchinyatsoda Kutsiva Bhatiri Yako
Kana uri chokwadi une dambudziko rebheteri uye urikutsvaga isingadhuri-bhatiri kutsiva sevhisi pane Apple, ini ndinokurudzira Pulse , sevhisi yekugadzirisa iyo ichauya kwauri kumba kwako kana kuhofisi uye kutsiva bhatiri rako paunenge wakamirira, mune mashoma semaminetsi makumi matatu.
Ndinovimba zvechokwadi kuti wakanakidzwa nekuverenga nekudzidza kubva muchinyorwa chino. Kuinyora rave riri basa rerudo, uye ndinotenda kune munhu wega wega anoiverenga nekuipfuudza kushamwari dzake. Kana uchida, siya mhinduro pazasi - ndinoda kunzwa kubva kwauri.